Koloiko sy Hajaiko ny Teniko |Mpanoratry ny Taona: Natolotra an'i Dafy Noely ny amboara - Gazety Taratra
Gazety Taratra, 12 Aprily 2018
Mpanoratry ny Taona: Natolotra an'i Dafy Noely ny amboara
Nosoratan'i Hary Razafindrakoto, gazety Taratra, 12 Aprily 2018, pejy 4.
Taona 2016 sy taona 2017, voatazon-dRandrianjakanavalona Dafy Noely hatrany ny maha-Mpanoratry ny Taona azy.
Fifaninanana tafiditra ao anatin'ny hetsika fanaon'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko ho fampiroboroboana sy fampivelarana ny tontolon'ny asa soratra malagasy. Natolotra azy, omaly tao amin'ny foiben'ny vaomieram-pirenena malagasy miara-miasa amin'ny UNESCO, etsy Behoririka, ny amboara milaza io vokatry ny fitsarana nataon'ny mpamaky io. Marihina fa ny asa soratra voarain'ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny teniko (KHT) tao anatin'ny taona iray no notsarain'izy ireo tamin'izany. Teo ihany koa ny sangan'asan'ireo mpanoratra nisongadina tamin'ireohetsika nampanaovin'ny Koloiko sy Hajaiko ny Teniko. Ho an'ny mpanoratra ankehitriny: mampirisika ireo mpanoratra rehetra mba hamoaka boky aho satria mihena dia mihena ny boky mirakitra ny asa soratra malagasy, hoy Dafy Noely.
Fantatra, omaly ihany koa fa hisy hatrany ny fivelaran'ity vondrona ity amin'ny fanatontosana hetsika tahaka izao. Efa nisy rahateo fifanakalozan-kevitra lehibe nifanaovan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny KHT tamin'ireo solontenan'ny fikambanana na vondrona hafa, tamin'ny faran'ny herinandro teo. Hisy ny fandravonana ireny sosokevitra ireny, atsy ho atsy, raha ny fanazavan'izy ireo, omaly.
Ankoatra ny fifaninanana Mpanoratry ny Taona, mitohy hatrany ny hetsika kolontsaina fanaon'ny KHT isaky ny vanim-potoana samy hafa. Raha ny vina napetraky ny mpikarakara, hitondra zava-baovao ho fampivelarana ny asa soratra malagasy hatrany izy ireo.